Nagu saabsan - Quanzhou Youhottest Dharka Dharka Co., Ltd.
Quanzhou Youhottest Dharka Co., Ltd. waa shirkad casri ah oo leh naqshadeynta, horumarinta, wax soo saarka iyo iibinta,waxaa la aasaasay sanadkii 2010, waxayna ku taalaa magaalada Quanzhou City China, oo ah aagga wax soo saarka Capital ee Dharka.Hadda waxaan haysanaa in ka badan 10,000kumbiyuutarrada bishii wax soo saar. Iyada oo la adeegsanayo heerarkeeda tayada adag, kooxda horumarinta hufan iyo nidaamka maareynta oo qumman, waxaan noqoneynaa mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee dharka hurdada ama kuwa dharka hurda ka keena Shiinaha. Waxaan u soo bandhignay adeegga OEM / ODM qaar ka mid ah noocyada caanka ah ee adduunka oo idil.Youhottest waxay diiradda saareysaa dharka galmada, dharka hurdada xariirta, dharka dumarka iyo naqshadaha kale ee caanka ah in ka badan 10 sano. Alaab keenayaashayadu waa xirfadlayaal waxayna isku daraan shirkad dhimatay oo u qalma ama shirkad daabacan oo ah caymis aad muhiim ugu ah tayada alaabtayada. Waxaan rajeyneynaa horumarka iyo xiriirka ganacsi ee macaamiisha aan la leenahay macaamiisha adduunka oo idil.Booqashadaada si diiran ayaa loo soo dhaweyn doonaa!
Tirada ugu yar ee dalabka ee qaababka keydku waa USD $ 50, qiimaha rarka kuma jiraan. Jaangooyooyin isku dhafan ayaa la heli karaa, waxaad dalban kartaa 1 suud oo qaab kasta ah, kaliya gaara $ 50 wadar ahaan, dejiyeyaal aan-ku-jirin ayaa noqon doona 100 ku habboon qaabkiiba
3. Ka waran waqtiga hogaanka?
Waxaan isku dayeynaa sida ugu fiican inaan kaa caawino inaad alaabtaada u hesho sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, amarkaaga dalbaday ayaa la baakadeyn doonaa oo la diri doonaa 24 saacadood ka dib markii aan xaqiijino wareejintaada lacagahaaga ee tirada manll (alaabta kaydka ah). waqtiga dhalmada wuxuu kuxiranyahay aaga wadanka aad joogto, Caadi ahaan, waxaa lagu imaan doonaa 3-10 maalmood, loogu talagalay gawaarida OEM / ODM, waqtiyadu waxay kuxirantahay faahfaahinta dalabkaaga, waxaan kuu sheegi doonaa waqtiga ugu dhow kahor inta amarkaaga la ansaxin.
4. Ka waran adeegga samaynta pattem？
Waxaan bixinaa adeegga OEM illaa 2010, waxaan bixinnaa tayo sare oo horeyba u caddeeyeen macaamiisheena guud ahaan iyo boqolkiiba suuqyada. waxaan ku sameyn karnaa pattem sameynta 24 saac gudahood haddii alaabtu ay tahay alaab keenayaasheena
5. ma heli karaa qiimo dhimis?
Haa. Amarro waaweyn iyo macaamiil daacad ah ayaa ku raaxeysan kara qiimo dhimis macquul ah.